Cabsi laga qabo fatahaad uu sameeyo Wabiga Shabeelle | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Cabsi laga qabo fatahaad uu sameeyo Wabiga Shabeelle
Cabsi laga qabo fatahaad uu sameeyo Wabiga Shabeelle
Wararka laga helayo Magalada Baladweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan ayaa waxaa ay sheegayaan in xilligaan dadka ku nool Magaaladaas ay ka cabsi qabaan in fahaado khasaaro geystay uu sameeyo Wabiga Shabeelle.
Wabiga ayaa dad Baladweyne kusugan ay sheegeen in uu buux dhaafiyey,isla markaana mararka qaar oo biyaha banaanka keenayo taas oo cabsi ku abuurtay dadka ku nool Magalada Baladweyne.
Qaar kamid ah dadka Shacabka ah ee degan xaafadaha ku dhow halka uu Wabiga ka maro Baladweyne ayaa bilaabey inay ka fogaadaan,waxaana horay u jirtay in uu fatahaad uu sameeyay uu geystay khasaaro nafeed iyo mid hantiyeed intaba.
Sanad kasta marka la gaaro xilli roobaadka ayaa Wabiga waxaa uu noqdaa mid buuxsama,isla markaana uu sameeyo fatahaad ay ka barakacaan badi dadka ku nool Magalada Baladweyne, iyaga oo aada dhinaca deegaanka Ceel-Jaalle Ee Duleedka Beledweyne.
Previous articleDuqa Muqdisho oo la kulmay Wakiilka QM ee Soomaaliya
Next articleGuddiga doorashooyinka Qaranka oo sheegay in ay Caqabado heystaan